प्रिय सोलु एफ. एम., फर्केर आउँछौ नि है… – dudhkoshionline
प्रिय सोलु एफ. एम.,
सबैको आवाज सोलु एफ. एम. ।
फाल्गुन १६ गते बेलुकी ११ बजेसम्म सबैको घर घरमा सूचना दिदै मनोरञ्जन प्रदान गरेर करीव ५ घण्टा समयको लागि विश्राम लिएका थियौ । तर केही समयपश्चात नै तिम्रो विश्राम भंग गरेर तिमीलाई अन्त्य गर्ने प्रयास कसले गर्यो होला । त्यो रात तिमी धेरै रोएका थियौ । पीडाले छटपटाएका थियौ । थाहा छ मलाई, तिमीलाई साह्रै गाह्रो भइरहेको छ ।
प्रिय सोलु एफ.एम.
गाउँघरमा किसानहरुको लागि मेलापातको साथि बनिदिएका थियौ तिमी । अनि विद्यार्थीहरुको लागि ज्ञान लिने माध्यम, बृद्धबृद्धाहरुको लागि सहारा जस्तै अनि अन्य शिक्षित वर्गको लागि समाचारको साथै सूचनाको स्रोत थियौ तिमी । हरेक वर्गको लागि एक बलियो सञ्चार माध्यम तिमी । सबैको सुख अनि दुखको साथि ।
बिहानी ओपनिङमा बज्ने एनि लै लै, होनि लै लै सोलु एफ एम यो सँगै बज्ने राष्ट्रिय गान सँगसँगै सोलु एफको दैनिकि शुरु हुन्छ । यो सँगै शान्त संगित, भजन, प्रवचन, पंञ्चांग, रासिफल, शुभकामना आदानप्रदान हुने कार्यक्रम शुभवचनबाट सोलु एफका श्रोताहरुको पनि दिनको शुरुवात हुन्थ्यो । त्यसपश्चात बुलेकी ११ बजेसम्म दैनिक रुपमा फरक फरक विषयमा प्रशारण हुने शैक्षिक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरु, समाचार, सामाजिक सन्देशसँगै सबैको घरमा गुन्जीथ्यो सोलु एफ एम ।
प्रिय सोलु एफ.एम.,
म स्कूल पढ्दादेखि नै तिमी मेरो साथि बनेका थियौ । म जता जता जान्थे तिमीसँगै जाने गर्थेँ । तिमीले मलाई नराम्रो कुरा कहिल्यै पनि सिकाएनौ । सधैँ राम्रा कुरा मात्र सिकायौ । त्यसैले त तिमी म जस्तै हजारौँ अनि लाखौँ श्रोताको प्रिय सोलु एफ एम ।
पहिला श्रोताको रुपमा मात्र सुन्न पाएकी थिएँ । बिस्तारै रेडियोमा प्रश्तोता भएर काम गर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने जिज्ञासा अनि कौतुहलता बढ्न थाल्यो ।
२०७१ सालको असार महिनादेखि सोलु एफ कै एक कर्मचारी बनेर काम गर्ने अवसर मिल्यो । खुशीको सीमा नै रहेन । बिस्तारै काम गर्दै जाने क्रममा गाह्रो अप्ठ्यारो नआएका पनि होइनन । तर गाह्रो अप्ठ्यारोसँग सामना गर्ने साहस पनि तिमीले नै दियौ ।
असार महिनाबाट रेडियो जोइन भएकी म, भदौ महिनाको पहिलो हप्ताको बिहीबार साँझ ५ बजेको हालचाल पश्चात नयाँ कार्यक्रम ह्यापी म्यासेजबाट अन एअर हुँदै रेडियोमा बोल्न शुरुवात गरेकी थियँ । अरु बेला रीपोर्ट अनि सूचनाहरु मात्रै रेकर्ड गरेकी मैले अन एअरबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा निकै नै डराएकी थियँ ।
जन्मिएपश्चात पहिलो बोलि मलाई बुबा र आमाले सीकाउनुभएको थियो । बुबाआमाले सीकाउनुभएको ती बोलीहरुमा अझ स्पष्टता, नीडर र शुद्धता ल्याउन साथै आवाजमा मिठास हुनुपर्छ है भनेर सीकाउने सोलु एफ एम । सबल अनि सक्षम बन्नका लागि मेहनत अनि निरन्तरता आवश्यक छ भनेर सिकाउने तिमी । सफलता मिलोस या नमिलोस निरन्तर कर्म गर्न सिकाउने तिमी ।
तिमीले मलाई साथि अनि गुरु बनेर धेरै कुरा सिकाएका छौ । तिमीले सिकाएको ज्ञान अनि सीपलाई कहिल्यै पनि बिर्सने छैन ।
भावनात्मक सम्बन्ध कति प्रगाढ अनि सुमधुर हुन्छ है । छाडेर जाँदा होस या जतिसुकै टाढा नै किन नहोस, माया त्यतिकै प्रगाढ हुने अनि सम्झना ताजै रहने । अन एअर । जहाँभित्र रहेको कुर्सीमा बसेर हेडफोन लगाएर प्राविधिक कक्षमा रहेका प्राविधिकले संकेत गरेपश्चात कार्यक्रम सञ्चालन गरेको यादहरु ताजै छन । अनि रेकर्डिङ स्टुडियो । कहिलेकाँही घण्टौँ लगाएर कार्यक्रम तयार पार्ने गर्थेँ । डेस्कटपभित्र फोल्डर बनाएर सेभ गरिएका पुराना कार्यक्रमहरु । भवन जलेसँगै सबै कुराहरु जलेर खरानि भए ।
फाल्गुन १७ गते बिहान मोबाइलको भाइब्रेसनले निद्रा खुलेको थियो । पूर्वसहकर्मी पशि शेर्पाले म्यासेन्जरमा कल गरेकी थिइन । कल रिसिभ गरेँ । उनले सोलु एफ एममा आगलागि भएछ थाहा पाउनुभयो भन्दै सोधिन । पत्याउने की नपत्याउने उनका कुरा । पत्याउन भन्दा विश्वास लाग्ने कुरा नै थिएन नपत्याउ त उसले मलाई कहिल्यै झुटो कुरा गर्दिन थिइन । हत्तपत्त फेसबुक खोलेर हेर्नसाथ मनोज श्रेष्ठ दाईको पोष्ट देखे । साह्रै दुख लाग्यो । त्यसपछि सोलु एफ एम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बुद्धि नारायण दाई, मनोज श्रेष्ठ दाई अनि कार्यकारी निर्देशक नुतन दाईलाई सम्झे । उहाँहरुले सधैँ सोलु एफ एममा कसले कति योगदान पुर्याएको छ अनि सोलु एफ एम आज यहाँसम्म ल्याउनको लागि गरेको संघर्ष अनि अब रेडियोलाई कसरी थप उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ होला लगायतका विषयमा चीन्ता लिईरहनुहुन्थ्यो ।
मनोरञ्जन सँगै सूचनाले सूसचित भइरहेका श्रोताहरु आज न्यास्रो मानिरहेका छन् । बिहान मिर्मिरेदेखि बेलुकीसम्म तिम्रो साथमा रमाइरहेका ती प्यारो मनहरु आज दुखित छन । तिमीभित्र आफनो भविष्य छ भनेर सपना सजाएका अनि तिमीले ती सपनाहरु पूरा गर्दिछौ होला सोचेर बसेका हजारौँ युवाहरु तिम्रो पुनरागमनलाई कुरिरहेका छन् । सोलु एफ एमबाट सञ्चार क्षेत्रमा स्थापित सबैको मनमा चोट पुगेको छ ।
गाउँघर अनि देश विदेशमा रहनुभएका लाखौँ शुभचिन्तकहरुले तिमीप्रति गहिरो सहानुभूति जनाइरहेका छन । थाहा छ मलाई खरानि भएको सोलु एफ एमलाई सहानुभूतिले केही पीडाहरु सहने शत्ति मिल्छ तर अहिले सहयोगको नै बढि खाँचो छ । त्यसैले सहानुभूति सँगै सहयोगको हात अगाढि बढाउन सकेमा सोलु एफ एम पुनः पहिलाको अवस्थामा फर्किनेछ । अनि फेरि गाउँघर, मेलापात अनि सहरबजारमा गुन्जदै तपाई हामी सबैको बिहान र्मिमिरेदेखि बेलुकीसम्मको साथि बनेर साथ दिनेछ । साथ दिनुहुन्छ नि हैन ।
सबैको आवाजलाई समेट्दै उज्वल भविष्यको लागि कामना गर्ने तिमी । कसैलाई भएको अन्यायप्रति वकालत गर्दै न्यायको लागि पहलकदमि गर्ने तिमी । स्वतन्त्र अनि निष्पक्ष रुपमा नागरिककोे आवाज समेटेर निडरताको साथ समुदायको हितमा आवाज उठाइदिने गाउँघरको आवाज तिमी । पक्कै पनि भग्नावशेषको रुपमा मात्रै रहिरहने छैनौ । तिम्रो पुनरागमन हुनेछ । तिम्रो त्यो पुनरागमनलाई जोडदार तालिका साथ स्वागत गर्न हामी सबैजना आत्तुर छौँ । फर्केर आउँछौ नि है ।
तिम्रो पुनरागमनको पर्खाइमा बसीरहेकी
पूर्व प्रश्तोता गार्डेन राई ।
Tags: solu fmsolukhumbu
म्यानमारमा सेनाको आक्रमणबाट एकैदिन ३८ प्रदर्शनकारी मारिए